Dhiiga culimada oo weli ku daadanaya Baydhabo “Sheekh caan ah oo xalay la dilay” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa waxey sheegayaan in xalay halkaas lagu dilay Sheekhii caan ah oo lagu magacaabo, Sheekh Aadan Macallin Cabdullaahi oo loo yaqiino Sheekh Aadan War-iisho oo ka mid ahaa Imaamka Masajidka ku yaalla Baydhabo.
Sheekha xalay la dilay ayaa wuxuu ahaa Sheekh si wayn loogu tixgiliyo deegaannada Koonfurta Soomaaliya; wuxuuna ahaa Imaamka Masaajid weyn, kana tirsanaa Majmaca Culummada Soomaaliyeed ee Ahlu-sunna Waljamaaca.
Marxuumka ayaa xalay lagu dhex-dilay gurigiisa, iyadoo toddobaadyo ka hor Baydhabo lagu dilay culummo ay ka mid ahaayeen, Sheekh Shariif Siid Cali, Sheekh Sooma-daare iyo oday-dhaqameed lagu magacaabi jiray, Maxamed Xasan Dhimbil oo lala dilay wiilkiisa.
Lama oga cidda leyneysa culimada gobolka Baay, hase ahaatee culimada la leynayo ayaa intooda badan kasoo jeeda Wadaadada Ahlusuna Waljamaaca.
Amaanka Magaalada Baydhabo ayaa sii xumaanaya xiliyada habeenkii ah, waxaana Magaaladaasi kusoo kordhay beegsiga iyo dilalka loo geesanayo Culumaa’udiinka Soomaaliyeed
Puntland iyo Alshabaab oo ku dagaalamay buuraha Galgala